“Ronaldinho waa mid ka mid ah xiddigaha aan ugu jeclahay dunida, waan jeclaan lahaa in aan qosolkiisa oo kale lahaado, laakiin..” – Sadio Mane – Gool FM
“Ronaldinho waa mid ka mid ah xiddigaha aan ugu jeclahay dunida, waan jeclaan lahaa in aan qosolkiisa oo kale lahaado, laakiin..” – Sadio Mane
Haaruun May 1, 2019
(Barcelona) 01 May 2019. Garabka duula ee kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa wareysi la la yeeshay ka hor kulanka adag ee caawa ay kooxdiisu la leedahay Barcelona lugta hore ee afar dhammaadka Champions League, waxaana la weydiiyay in uu ka tagayo Liverpool, kuna biiri doono midkood kooxaha Real Madrid ama Barcelona.
Mane oo u jawaabayay weriyeyaasha Spain ayaa waxa uu yiri: “Waa su’aal wanaagsan, adinka ayaa warkaa qoray, waan qadariyaa La Liga, waa horyaal wanaagsan oo ay ka ciyaaraan ciyaartooy heer sare ah, laakiin horyaalka Premier League isaguba waa horyaal fiican oo ciyaartooy walba oo jecel inuu keligiis is muujiyo uu daneeyo in uu ka ciyaaro”.
“Fursad wanaagsan ayay ii tahay in aan halkaan ka ciyaaro, waana ku faraxsanahay Liverpool” ayuu sii raaciyay laacibka Senegal ee Mane oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 20 gool oo Horyaalka Ingiriiska ah.
Mar uu ka hadlayay Barcelona wuxuu yiri Mane: “Ronaldinho waa mid ka mid ah halyeeyada aan ugu jeclahay kubadda cagta, waan jeclaa daawashada ciyaarihiisa, gaar ahaan intii uu joogay Camp Nou, waxaanse aad u sii jeclaa inaan anigoo koox kale wata aan wada ciyaarno, hadda halkaan ma joogo Ronaldinho, laakiin weli waan jeclahay, mar walbana waa halyeygeyga”.
«Waxaan kaloo aad u jeclaa xirfaddiisa iyo dhoolla caddeyntiisa, waxaa laga yaabaa mararka aan anigu dhoola cadeynayn inta aan garoonka ku jiro in dadku ii arkaan mid xanaaqsan, laakiin waan jeclaan lahaa in aan dhoola caddeyntii Ronaldinho oo kale yeesho, hase yeeshee isku mid ma nihin oo arrintaa kama sinin”.
Ciyaaryahan Sadio Mane oo 27-sano jir ah ayaa bishii Novemberheshiis 5 sanadood ah u saxiixay kooxda Liverpool, waxaase la la xiriirinayaa in tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane uu si weyn u bar tilmaameedsanayo laacibkan Afrikaanka ah sida bishii hore lagu qoray Wargeyska ‘El Confidencial’.
Wakiilka Matthijs de Ligt oo doonaya in daafacan uu ku biiro Kooxda Manchester United
Laacibkii kooxda Arsenal ka reebay Champions League sanadkii 2003 ee John Crew oo noqday jilaa dhanka Filimmada ah